Isa blush - Maitiro ekuzviita zvinoenderana nechiso chako | Bezzia
Susana godoy | 15/09/2021 12:00 | Runako
Iwe unoziva here kuisa blush? Zvinotaridzika sechinhu chiri nyore kwazvo uye hazvireve kuti tinofanira kuzvinetsa zvakanyanya, asi dzimwe nguva kana tikasatevedzera nhanho dzakakodzera, mhedzisiro yacho inogona kunge isingave. Saka, inguva yekuziva maitiro atinofanira kuita zvinoenderana nerudzi rwechiso chatinacho.
Sezvo zvatinoda zvinogara zviripo simbisa edu akanakisa mapoinzi uye zvikamu, saka pane izvi tinoda rairo yakanakisa. Pamwe iwe waifunga kuti blush yanga isina sainzi yakawanda kana zvasvika pakuiswa, asi sezvaunozoona iinewo madiki madiki. Nekudaro, rega iwe utakurwe navo vese uye iwe uchaona iwo makuru mhedzisiro iwe yawaitarisira.
1 Mashandisiro ekutsvaira pachiyero kumeso
2 Maitiro ekushandisa kutsvuka pameso evalval
3 Nyorera kutsvuka pazviso zvakatenderedza
4 Kune zviso zvakareba kwazvo
Mashandisiro ekutsvaira pachiyero kumeso
Tinotanga nechiso chekwere, inova iyo ine shaya yakamisikidzwa uye yakajeka. Nenzira imwecheteyo, matama ako anozove akakurisa uye izvi zvinoreva kuti isu tinofanirwa kutevedzera nhanho dzematanho kuti tikwanise kuisa blush. Sezvo isu tichichida, iko kupa kutapira kupedzisa kune icho chinonzi chinonzi chakaomeswa. Saka, isu tirikutsvaga iyo pfupa uye isu tichaonesa chikamu chepamusoro chayo. Ichave iripo patinoisa blush asi tichigara takananga kuchikamu chekunze. Gadzira mashoma madenderedzwa ekufambisa munzvimbo kuti asangane zvakanaka uye iwe uchaona kuti iko kubata kwevechidiki kunoratidzwa sei nenyaya yemasekondi.
Maitiro ekushandisa kutsvuka pameso evalval
Ichowo chimwe chezviso zvakajairika uye mune ino kesi, zvinofanirwa kutaurwa kuti vane chikamu chemasaya akafara kupfuura chin chin nzvimbo uye kunyange pahuma. Nekudaro, izvi zvinoita kuti zvive pachena kuti zvave kutokwenenzvera matama, saka izvi zvakasarudzika zvinoita kuti tishamisika kuti tingaisa sei kutsvuka. Ichokwadi ndechekuti zvakare iri nhanho yakapusa uye ndiko kuti, Tichawedzera nzvimbo uye isu tichaiisa pese padama, panzvimbo pekungori pachikamu chechefu. Asi hongu, yakasviba zvakanaka uye nemavara akajeka seperekisi iyo inogara iri imwe yezvakanakisa. Edza kuita kuti ruvara rwuende kubva pakati kuenda kunzvimbo dziri padyo.
Nyorera kutsvuka pazviso zvakatenderedza
Kana tichitaura pamusoro pezviso zvakatenderedza, tinotaura avo vane daro rakaenzana zvakanyanya mukukwirira uye hupamhi, saka zvikamu zveangular zvinoraswa asi hongu, matama anowanzo kuve akafara. Saka maitiro ekushandisa blush kuti itibatsire kuratidza kunaka kwedu, zviri nyore kwazvo. Mune ino kesi zviri nani chiise pazasi chete pabhonzo redama rako uye dzivirira chikamu chematama. Zvirinani kuti iwe uzviite nenzira yekukwira sekunge kuti ruvara ruchasvika kumatemberi. Nekuti inzira yekureba nzvimbo ino.
Kune zviso zvakareba kwazvo
Rudzi rwechiso urwu rwunoita kuti chirebvu chiwedzere kuve chakareba uye chakatetepa, chinova chinonyanya kuve chakakurumbira. Asi ichokwadi kuti pakuderera matama anomirawo. Nekuti, Zviri nyore kugadzira mhando yetambo yakatwasuka inoenda kubva munzvimbo yemhino kusvika panosvika nzeve. Nekuti ndiyo nzira yekutyora neiyo mufananidzo wehurefu uyo ​​huso uhu hune nekuupfupisa, kunyangwe kana uchingova padanho rekuratidzira.
Kazhinji kacho kumeso kutetepa uko huma yakatetepa asi shaya yakafara. Saka, kuitira dzikamisa idzi nzvimbo dzese zvishoma tave kuzora blush nenzira kwayo. Muchiitiko ichi tichaita mhando yemutsara muchikamu chepamusoro chepadama. Chinhu chakaitikawo nekwere dzerudzi rwemeso. Iwe unofanirwa kugara uchiteedzera iyo yakasarudzika mutsara weakanzi cheekbone. Iye zvino hausisina zvikonzero zvekuratidzira kumeso kwako!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Mashandisiro ekutsvagisa zvinoenderana nechiso chako